Itoobiya: Masar waxay dooneysaa inaan saxeexno heshiis ay dan noogu jirin |
Itoobiya: Masar waxay dooneysaa inaan saxeexno heshiis ay dan noogu jirin
Wadaxaajoodydii sanadaha badan soo socday ee ku saabsanaa biya xireenka weyn ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile ayaan weli xal laga gaarin.
Kulanki ugu dambeeyey ee la rajeeynayey in heshiis lagu gaarana wuxuu ahaa kii ka dhacay magaalada Washington oo ay Itoobiya ka qayb gelin.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Gadu Andargachew ayaa wareysi gaar ah oo ku saabsan amuurtan siiyey BBC Amharic wareysiga wuxuu u dhacay sidatan.
Wadaxaajoodkii seddex geesoodka ahaa ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeyey ee ku saabsanaa biya xireenka ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile halkuu marayaa?
Dagu Arndargachew: Wadaxaajoodka wuxuu marayaa qaybihi ugu dambeeyey iyada oo uu soo socday muddo sagaal sana ah tani iyo marka ay Itoobiya billaawday dhismaha biya xireenka. Dhismaha biya xireenka markaan billaawnayba waxaa cabashada ka soo jeediyey dalalka Masar iyo Suudaan anaguna waxaan isku daynay waddamada inaan ku qancinno biya xireenka aan dhiseyno inuusan waddamadaasi wax dhibaata ah uu u geysaneyn.
Kaddibna waddamadu waxay ku baaqeen in la billaabo kulammo si wixi ay isleeyihiin madmadow ayaa ku jira si la isulana meel dhigo.
Wadahadallo dheer kaddibna Itoobiya waxay oggolaatay iney khubara ka socda waddamada Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska, Koonfur Afrika, Masar, Suudaan iyo Itoobiya ay daraasad ku sameeyaan saameynta biya xireenka ay Itoobiya dhiseyso uu u geysan karo waddamada Masar iyo Suudaan.
Wadaxaajoodyada marxalada kala duwan waxay soo maraanba wuxuu hakad galay 2018-kii maadaamaa ay Masar diidday iney saxiixdo.
2019-kina Masar ayaa haddana soo jeedisay iney diyaar u tahay wadaxaajoodyada iney dib u billaawdaan qaybna ay ka noqoto, Suudaanna sida oo kale waxay u soo noqotay wadahadalladii.
Arrima dhowr ah isafgarasho ayaa laga gaaray haddana waxaa jiray arrima la isku mari waayey, kaddibna madaxda Itoobiya iyo Masar waxay ku kulmeen magaalada Sochi ee dalka Ruushka iyaga oo ku heshiiyey iney wadaxaajoodyada dib u billaabaan.
Mareykanka ayaa sida oo kale dalbaday inuu wadaxaajooda uu gacan ka geysto iyada oo kaashaneyso Bangiga Adduunka annagana wada xaajoodka waan oggolaannay.
Mareykanka ayaana soo jeediyey qodobba aan noo cuntamin oo u janjeeray rabitaanka Masar annaguna waan diidnay inaan heshiis ka gaarno arrimihi la isku mari la’aa sidaa ayeyna wadaxaajoodyadu ilaa iyo hadda ku taagan yihiin oo ay hakad u galeen.
Dowladda Itoobiya maxaa kala gudboon arrimaha wadaxaajoodka?
Dagu Arndargachew: Anagu waxaan aaminsannahay haddii la wada hadlo in la heshiin karo. Balse dhinaca Masar hal arrin ayaa laga sugayaa Biyaha aan isku hayno waa kheyraad ka dhaxeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan marka iney aaminaan iney Itoobiya xaq u leedahay iney kheyraadkeeda ka faa’ideysato uu yahay xaq lama taabtaan oo ay leedahay, wixi intaa ka soo hara ee lagu kala duwan yahay wadahadallo ayaa lagu dhammeyn karaa.
Heshiisna lama gaari karo ilaa uu dalba dalka kale xuquuqdiisa uu u oggoleen, gaar ahaan Masar waxay dooneysaa heshiiski guumeysiga ee caddaalad darrada ku dhisnaa ee ay 1959-kii wada galeen Masar iyo Suudaan inuu sii socda rabitaanka ay u muujinayaan waa iney joojiyaan.
Wixi intaa ka baxsan Itoobiya waxay diyaar u tahay in wadahadal lagu dhammeeyaa xoogagga seddexaad ee isku dayaya iney faragelin iyo cadaadis nagu sameeyaan ay faragelintooda joojiyaan.
Waxaa jira warar sheegaya Mareykanka inuu Itoobiya ku cadaadiyey heshiis iney gasho marka Itoobiya maxay arrintaa kaga jawaabeysaa?
Dagu Arndargachew: Marka hore Mareykanka wuxuu aad nooga caawiyey arrimaha lagu kala fogaa in la isaga soo dhawaado oo taasi ma aha mid la dafiri karo. Hase yeeshee, Mareykanka wuxuu rabay in heshiiska degdeg lagu soo afjaro oo ay degdeg u arkaan wadahadallada sanadaha badan soo socday oo heshiis lagu soo afjaray.
Annaguna waxaan iska taagnay heshiiskan ‘inaan degdeg’ lagu soo afjari karin maadaamaa uu yahay mid quseeyo masiirka jiilka hadda jooga iyo jiilka soo socdaba. Waxaan sida oo kale soo jeedinnay heshiis haddii la gaaraya iyo haddii kalaba iney go’aanku iska leeyihiin seddexda dal ee ay arrinta u dhaxeyso oo aan loo baahneen cid kale iney faragelin toos ah ku sameyso.
Wasiirka Maaliyadda Mareykanka ayaana si gaar ah isugu dayay inuu nagu cadaadiyo waxyaaba aan raalli ka ahayn oo heshiiskaasi la xiriiro annagana waxaan u sheegnay iney sax ahayn oo aan aqbleyn.
Marka Mareykanka iyo Bangiga Adduunka haddii ay dhexdexaadinta markale u soo noqdaan Itoobiya wax dhib ah kuma qabto miyaa?
Dagu Arndargachew: Wadaxaajood kasta oo la yeelanayo waa inuu ahaadaa mid ku saleysan mabaadiida, balse Itoobiya dhib uma aragto cidda dhexdhexaadinta ka qayb qaadaneyso iyo cidda ka baxeyso, waxaase marwalba in la ogaado u baahan doorka seddexda dal uu heshiiska u dhaxeeyo ay arrintan ku leeyihiin cid kale oo beddeli karto iney jirin.
Masar 90% biyaha waxay ka heshaa Wabiga Abaay (Nile). Sidaa darteed waxay aaminsan tahay biya xireenka inuu saameyn uu u geysanayo biyaha ay heli jirtay, marka cabsida ay Masar muujisay miyuusan macquul ahayn?
Dagu Arndargachew: Masaaridu waxay doonayaan inaan saxiixno heshiis aan caddaalad ahayn. Annagana waxaan u sheegnay maadaamaa heshiiskaasi uu waxyeelleynayo danta guud ee qaranka inaan saxeexeynin. Iyaga oo ka duulaya mowqifka Itoobiya ay iska taagtay waxay billaabeen olola ballaadhan. Ma hubo iney ku guuleysan doonaan ololahaasi weynu arki doonnaan, balse waxaan aaminsanahay waddada ay ku socdaan iney sax ahayn.
Haddii ay isleeyihiin Itoobiya haddii aan saarno cadaadis diblomaasiyadeed heshiiskan ay danta ugu jirin wey saxeexeysaa waa midaan marnaba suuragaleyn. Biya xireenkana waxaa laga dhisayaa jeebka shacabka saboolka ah ee dalka Itoobiya. Marka biya xireenkan heshiis kasta oo ku saabsan oo la galayo haddii uusan ahayn mid aan xaqiijineyn faa’idooyinka waara ee ay biya xireenka iyo wabigaba ay ka leedahay inaan cadaadis iyo cabsi gelin u marnaba ku suuragaleyn.
Waxaase wanaagsan walaaladeen si deggan inaan u wada hadalno wixi aan isku diiddannahayna aan dabcinno wax walba waa dhammeyn karnaa. Itoobiya ma dooneyso arrinta Abbay iney noqoto xuddunta khilaafka iyo ismari waaga oo waxaan doonaynaa wabiga inuu noqdo mid iskaashi ku qotoma oo ay dalalku ka wada faa’ideystaan.
Korontada ay Itoobiya ka dhalineyso biya xireenka waxaa ka faa’ideysanaya Itoobiya, Suudaan iyo Masar waa haddii ay dooneyso. Itoobiya oo ah dal dadaal ugu jiro sidi uu dhaqaalahiisa uu u kobcin lahaa waxayna dooneysaa waddamada deriska la ahna iney horumar la mid ah garaan.